दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो – Kavrepati
Home / समाचार / दुनियाँको एक कहालीलाग्दो मृत्युले अत्यन्तै भावुक बनायो
admin August 21, 2021	समाचार Leaveacomment 93 Views
“आफू सामान्य बिरामी भएको खबर कामले नेपालगन्ज गएका श्रीमानलाई पुर्‍याउछिन । ,श्रीमानले गाउको मेडिकलमा उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
निको नहुदा आफू यतै छु काखको बच्चा मात्र ल्याएर आउ यतै उपचार गरेर जाँउला भनी नेपालगन्ज बोलाउछन उनका श्रीमानले । अब बाँच्ने आशा सहित उनी घरको सबै चाँजोपाँजो मिलाई एक दुधे बालक काखमा च्यापेर एक्लै नाइट बस चड्छिन उनी ।
गाडीमा चिनेको मान्छे कोहि नहुदा काखको बालकलाई नै आफ्नो रात्रिकालिन यात्राको साथी अनि बिरामी अबस्थाको साहारा सम्झदै यात्रा गरिरहेकी हुन्छिन उनी । बिच बाटामा उनलाइ उल्टि हुन्छ ।
वरपरका सबै सिटका मान्छेहरु मस्त निद्रामा हुन्छन् । उनी आत्तिन्छिन र काखको बच्चालाई ओल्टाइपल्टाई बिउझाउने कोसिस गर्दा पनि उ बिउझिदैन । ,उनलाई उकुसमुकुस हुन्छ र सोच्छिन कि बाटामा मलाई केही भैहाल्यो भने यो काखको छोरा.. ???
Previous रामकुमारी झाक्रीले कुन हकले माधव नेपालको हात समातेर ता,नेको, खुल्यो कसैले नसोचेको ड,रलाग्दो रहस्य – भिडियो सहित
Next अन्ततः एलिजा बस्नेत पोखरामा परिन पक्राउ